Global Voices teny Malagasy » Rosia: Hazo Noely adala ao Vladivostok · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Oktobra 2019 2:01 GMT 1	 · Mpanoratra Masha Egupova Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Miranah
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Hehy, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina, Akon'ny RuNet
Miady isan-taona amin'ny ranomandry ny mponina ao an-tanàna, saingy hafa tamin'ity ririnina ity satria miatrika orana ihany koa izy ireo. Amin'ny fomba nentim-paharazana, rakotra ranomandry ny arabe sy ny lalana ao an-tanàna ka tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mijery izany amin'ny lafiny tsara ny olona. Noho izany, herinandro vitsy lasa izay, taorian'ny orambe mivatravatra, saika nivadika ho ranomandry fikorisana goavana ny tanàna manontolo ka nikorisa mihitsy tamin'ny sisin-dalana ilay bilaogera yasinkov .
Fiasco malaza iray izay nasehon'ny mpiserasera toa an'i Den tao amin'ny aterineto, ary nomarihany  hoe [RUS]:
Raha nanala azy ireo bilaogera sasany, mpiserasera Маргарита [Margarita] kosa nilaza hoe :
Tamin'ity taona 2010 ity, dia efa betsaka ny noresahana momba ny hazo krismasy. Nahena hatramin'ny atsasany  [Rus] ny tetibolan'ny fetiben'ny Taombaovao. Na izany aza, nanantena ny mpiserasera fa ho simba indray ny hazo Krismasy. Mpisera LJ fstrelcov  nanolo-kevitra  [Rus] hametraka vatobe efajoro miloko maintso miaraka amin'ny soratra hoe “Hazo Krismasy” fa tsy hazo voajanahary, mba ho mafy ny fananganana ary mahatohitra rivotra mahery. Toa tsy noraisin'ireo tompon'andraikitra sy mpanaingo izany hevitra izany fa mbola nanangana hazo noely nentindrazana manerana ny tanàna izy ireo.
Manohy manara-maso ny zava-misy amin'ny hazo Krismasy ilay bilaogera malaza ao Vladivostok, zeka_vasch  ary mamoaka antserasera ireo fanehoan-keviny miaraka amin'ny sary. Mbola manantena ny olona fa ho vaky na hirodana ny hazo noely ao amin'ny kianja afovoany, manome voninahitra ny fomba nentin-drazan'ny tsy fahombiazana malaza ao Vladivostok.
Te-haneho ny fankasitrahany manokana ho an'ilay bilaogera zeka_vasch  izay nanome alalana azy hampiasa ny sariny tamin'ity lahatsoratra ity ny mpanoratra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/26/144303/
 vola am-polo tapitrisany robla tamin'ny hazo Krismasy mirefy 28 metatra : http://news.vl.ru/photos/2009/12/30/72523/
 Nahena hatramin'ny atsasany: http://news.vl.ru/vlad/2010/10/08/urezali_rashody/
 flash mob mba hanakodia baolina ranomandry goavana anankiroa : http://vkontakte.ru/events.php?act=s&gid=22134572